Miyaad iga caawin kartaa helitaanka faa'iidooyinka SEO ee dib u eegista?
Ka hor intaan wax kale jirin, aan aragno ereyada ugu muhiimsan ee ku saabsan dib-u-qabashada SEO. Waa inaad ogaataa shuruudaha caadiga ah ee ku saabsan isku xirka websaydhka iyo habka loo xirxirayo dhismaha miisaanka. Aan eegno aasaaska asaasiga ah ee ku saabsan dib udhigista sharaxaadda asaasiga ah.
. Khudaarta Link waa "awood," "qiimo," iyo "awood" oo xiriir ah oo laga gudbay hal bog oo websaydka kale. Ereygan waxaa loo isticmaalaa in la tixraaco dib u eegis tayo leh oo leh astaamo DoFollow oo lagu soo galiyey HTML code. Backlinka noocan oo kale ah ayaa badanaa loogu talagalay in lagu gudbiyo ama dib loo cusboonaysiiyo mid ka mid ah wajiyada xiriirka ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'score PageRank'.
Backlinks oo leh DoFollow
Isku-xireyaasha DoFollow - waa nooca kaliya ee dhabarka loo isticmaalo ujeedada SEO. Si fudud u dhig, awood awood leh oo dib u qabasho leh DoFollow wuxuu kufaraa inta badan awoodda ay u leeyihiin inay gudbaan Link Juice. Xiriiriyahan waxay u adeegaan ujeedooyinka tusmada - waxaan loola jeedaa inay gacan ka geystaan ​​raadinta biinanka koraya ee ku socda qaybaha kala duwan iyo bogagga boggaaga ama bloga. Isla mar ahaanteed, dhabarka danbe ee DoFollow wuxuu bixiyaa waddo dibadeed ah oo tilmaamaya bogga la soo geliyey meel kale oo ka baxsan Webka. Waxay micnaheedu tahay in qof kasta oo nool oo loo ogol yahay inuu "raaco" waddada xidhiidhka la xidhiidha.
Backlinks NoFollow waxaa lagu sharaxi karaa noocyada kale ee isku xirka, si kastaba ha ahaatee, ku dhawaad ​​miisaanka iyo saamaynta SEO. Ku dhajisey taako NoFollow ah, iskuxirayaashu ma dhaafi karaan Khamriga Khadka. Sidaa awgeed, saameyn toos ah uguma yeelan booska bogga. Tusaale ahaan, Xirfadaha NoFollow waxaa loo isticmaali karaa markaad u baahatid in aad sameysid xidhiidh dibadda ah oo aan si buuxda loogu bogsan karin boggaan ama blog. Si kastaba ha ahaatee, waxay weli yihiin kuwo waxtar u leh indha-indheynta iyo waxay kaa caawin karaan inaad dhisto noocyo kala duwan oo isku xiran oo kala duwan oo leh awooda sinnaanta iyo ujeedada. Iyo gaar ahaan kala duwanaanshuhu waa hantida ugu faa'iideysan ee profile-kaaga. Waxaan u jeedaa calaamad tani waa mid muhiim u ah Google si loo tixgeliyo marka ay timaado bixinta boosaska jagooyinka.
Dib-u-celin Sare Dib-u-eegis
Qeybtan dib-u-dhiska ayaa lagu sharxi karaa xiriirka hooseeya ee tayada-hoose-dhexe sida caadiga ah oo lagu abuuray isku day diyaarsan oo lagu kicinayo jagooyinka raadinta ee hadda ee dhammaan qiimaha. Waxaan loola jeedaa in laysku daro spamka, aan ku habooneyn ama xitaa sharci darrada ah, xidhiidhadaasi waxay u badanyihiin in ay waxyeellada guud ee SEO kuugu yeeshaan, intii aad siin lahayd wax horumar ah oo dhab ah. Taasi waa sababta aad uga digtay oo aad uga fogaato xiriirada hoose ee tayada leh ee sida badan ku faafay qadar balaadhan oo ka yimaada wheels (link exchanges), PBNs (shabakadaha khaaska ah ee shabakadaha), ama bixiyeyaasha aan khasaare ahayn oo bixiya xirmooyinka mushaharka dabiiciga ah ee iibka ah.
Noocaan dhisme noocaan ah waxaa loo isticmaalaa in la siiyo aasaas adag ee dhismaha bogga, ka qaybqaato waayo-aragnimo fiican oo la adeegsan karo. Xiriirada gudaha ayaa siinaya marinka ku jira isla domainka - adigoo fududeynaya in aad ku socoto qaybo kala duwan iyo boggag laxiriira bogga internetka ama blog. Si kastaba ha ahaatee, waa in qaab-dhismeed macquul ah uu weli yahay signal la qiyaasi karo, taas oo gacan ka geysan karta booska rikoodhka u sarreeya ee wakhti dheer, ugu yaraan si dadban Source .